ခါတော်မီ On time | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခါတော်မီ On time
ခါတော်မီ On time
Posted by Ma Ma on Mar 5, 2014 in Creative Writing, Photography | 37 comments
ခါတော်မီ ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
မြန်မာစာသင်တဲ့ မြန်မာစစ်စစ်ဆရာမကြီးကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသလို သူသင်ပေးခဲ့တာတွေကိုလည်း ကြုံတိုင်းအမှတ်ရမိတယ်။
ကလေးဘ၀တုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဦးဖိုးကျားရဲ့ အခမဲ့ကူလီထမ်းခြင်း၏အကျိုး ဆိုတဲ့ စာဆိုရင် ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ စွဲမြဲမှတ်သားထားမိစေတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဦးဖိုးကျားရဲ့ ဘုရားဖူးသွားခြင်း ဆိုတဲ့စာထဲမှာ ပါလာတဲ့ ခါတော်မီ ဆိုတာ
အချိန်အခါအလျှောက်ပေါ်လာတာ ကိုခေါ်တယ်လို့ မြန်မာစာဆရာမက ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်။
ကိုယ်လည်း စာမရေးဖြစ်တာ ကြာနေရာက သဂျီးက ပိုစ့်တွေပွိုင့်တိုးပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ ပိုစ်တင်ဖို့ ကြိုးစားဖြစ်လို့ ခါတော်မီ ပေါ့။
အရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ သစ်ပင်တွေကို မြင်တော့ ဗစ်တာခင်ညိုသီဆိုထားတဲ့
ရိုးတံကျဲကျဲ ပင်အိုတို့အလှချင်းလည်းပြိုင်…. ဆိုတဲ့သီချင်းကို သတိရမိသလို ရွာထဲကနေပါလာတဲ့ အကျင့်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တော့လည်း ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ရွာထဲမှာ ပြန်ကြွား အဲ… ပြန်မျှဝေချင်မိပြန်ရော။
ရိုးတံကျဲကျဲ …. ပင်အိုတို့ အလှချင်းလည်းးးးးးးးး ပြိုင်…
နေ့တိုင်းအလုပ်သွားဖို့ မနက်စောစောထရလို့ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေဆို နေမြင့်အောင် အိပ်တတ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေတုန်းကတော့ မတ်လကြီးမှာကျတဲ့ မနက်ပိုင်းနှင်းမှုန်မှုန်နဲ့ ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေးကို သဘောကျလို့ လမ်းထလျှောက်ဖြစ်တယ်။
နှင်းမှုန်မှုန်ကြားက မပီဝိုးတ၀ါးမြင်ကွင်းက လမ်းလျှောက်ဖို့ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ စွဲဆောင်လေတော့……
ကိုယ်မြင်တွေ့ခံစားရတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သိမ်းထားချင်၊ မျှဝေချင်တဲ့ စိတ်ကို တခြားသူတစ်ယောက်မှာလည်း တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာသွားတယ်။
နေပြည်တော်ဗုဒ္ဓဂါယာကို သွားတုန်းက ဓာတ်ပုံပြခန်းမှာ ဗုဒ္ဓဂယာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားပြီး ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာရိုက်ပြီး မသွားနိုင်တဲ့သူတွေကို အပင်ပန်းခံမျှဝေထားတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဓာတ်ပုံပြခန်းကို ကြည့်နေကြတဲ့ ဘုရားဖူးတွေ
ဓာတ်ပုံပြခန်းကို ၀င်ကြည့်ပြီးတော့ ဒီလိုအပင်ပန်းခံရိုက်ပြီး မျှဝေထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကို မြင်ဖူးချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။
ကိုယ်လိုပဲမြင်ဖူးချင်တဲ့သူတွေ ရှိမှာကို သိလို့ထင်ပါရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးအပြီးမှာ ဓာတ်ပုံဆြာက ကိုယ်ထင်ပြထားတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာလည်း အဲဒီလို ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးခရီးစဉ်ပုံတွေကို ပြတဲ့ ပြခန်း လုပ်ဖူးသေးတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံဆရာပဲလားတော့ မသိဘူး။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညဘက်ရွှေတိဂုံဘုရားတက်ဖြစ်တော့ ရာဟုဒေါင့်နားက အောင်မြေမှာ ပရိုဂျက်တာကြီးထိုးပြီး ဗုဒ္ဓဂယာခရီးစဉ်အကြောင်းကို မိုက်နဲ့ ရှင်းပြနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
ထိုင်ပြီး နားထောင်ကြည့်ရှု့နေသူတွေ အများကြီးပဲ။
ကိုယ်လည်း ခရီးသွားဟန်လွဲနားထောင်မိတော့ ဘုရားတည်ရင် ရတနာပစ္စည်းတွေ ဌာပနာတဲ့အကြောင်း ပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သူများလှူ တိုင်းလိုက်လှူ ကြလေ့ရှိတယ်။
ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာ ရေရေရာရာ ဂဃနဏ မသိကြဘူး။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုပဲမသိလို့ ဘုရားတည်ရင် ရတနာတွေ ဌာပနာတာကို အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးထင်ပြီး သဘောမကျခဲ့ဘူး။
အမှန်က ဘုရားတည်တဲ့အခါ ရတနာတွေ ဌာပနာရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တချိန်ချိန်မှာ ပြိုပျက်လို့ဖြစ်စေ အကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ ပြုပြင်ဖို့လိုလာရင် နောက်ပြုပြင်မယ့်သူအနေနဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲမဖြစ်ရလေအောင် ဌာပနာထားတဲ့ ရတနာတွေကို ထုခွဲပြီး ပြုပြင်စရိတ်လုပ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲလိုကျတော့မှ ရှေးလူကြီးတွေ အမျှော်အမြင်ကြီးလှပါပေတယ်လို့ ချီးကျူးမိတယ်။
ညဘက်ဘုရားရောက်တုန်း ဝေေ၀ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို အားကျပြီး Night mode နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်မိတယ်။
Night mode နဲ့ ရိုက်ကြည့်တာ
ကိုယ့်သားသမီးကို လှတယ်ချည်းထင်တတ်သလိုမျိး ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ မလှမပကိုလည်း မြတ်နိုးမိတာပဲ။
Touch screen ဖုန်းလေးတွေနဲ့ ရိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်လိုတဲ့နေရာကို လက်ထောက်ရုံနဲ့ ဖိုးကပ်စ်ယူပြီး ရိုက်နေတာတွေ့လို့ စမ်းပြီး ရိုက်ကြည့်ခဲ့တာ။
ဘုရားကိုပတ်ပြီး ပြန်မယ်အလုပ်မှာ အောင်မြေရှေ့ကို ပြန်ရောက်တော့ လူတွေအများကြီး ဘုရားထီးတော်ကို မော့ကြည့်နေကြတယ်။
ဘုရားက ရောင်ခြည်တော်လွှတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။
ထီးတော်နားမှာ အရောင်တလက်လက်ထွက်နေတာ ပုံမှာမပေါ်ဘူး။
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ရွှေတိဂုံကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာရောက်ဖူးပေမယ့် ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတော့ မမြင်ဖူးဘူး။
ပုံလေးတွေနဲ့စာတွေကို ကြည့်ရှု့ခံစားသွားတယ် မမရေ။ ဆောင်းဝေနေတဲ့မနက်ခင်းလေးတွေကြည့် ရတာ ကိုယ်ပါပြန်အေးလာသလိုခံစားမိပါတယ်။ ဘုရားပုံတွေတော့ ကြည့်ညိုသွားပါတယ်။ နီးရက်နဲ့ဝေးဆိုတာ ကိုတော့ဖြင့် နားမလည်ဘူး မမရေ။ သစ်ရွက်ရယ် ဖိနပ်ခြေရာရယ် မြေပြင်နဲ့လမ်းမအစပ်ရယ်။ ဘယ်သူနဲ့ဝေးနေလို့ ခံစားနေရပါလိမ့်လို့ ချဲ့ကားတွေးမိလိုက်သလိုပဲ မမရယ်
နူးနူးဘာဂိုဏ်းသားတွေ ပြောသလို အထင်ကြီးခံရလည်း မနည်းဘူး။
အဲဒီပုံက လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း သစ်ရွက်လေးတွေက မြေပြင်ကနေ ကတ္တရာလမ်းပေါ်မတက်နိုင်တာကို မြင်ပြီးးးးးးး
တခါတလေမှာ အလှမ်းမဝေးပဲ နီးနေပါလျှက်နဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် မရောက်နိုင်/ရ တာကို ပြောချင်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီး ရိုက်ထားတာ။
ဓာတ်ပုံတွေထည့်ရတာကြာလို့ ပုံတွေအကုန်တင်ပြီးမှ စာဖြည့်ရေးလိုက်တော့ အဲဒီပုံက ညှပ်ပြီး ပါသွားတာ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ခုမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူ ချင်းချင်းးးး
ပို့(စ) အားဂျင်း တင်သူ ချင်းချင်း အားပေးတယ် ချစ်မ။
ဓာတ်ပုံတွေကနည်းနည်း အရွယ်ကြီးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
နားထဲမှာ သစ်ရွက် ခြောက် မြေမှာ ရှပ်တိုက်သံတွေပါ ကြားယောင်လာတယ်။
ချင်းချင်း အားပေးတဲ့သူကိုလည်း ပြန်အားပေးမယ်။
သတ်ပုံဆရာမကြီးကို သတ်ပုံ မမိပေမဲ့ လ မှားတာ မိနေပြီ ..
၁ ။ နေပြည်တော် က ဗုဒ္ဓဂါယာ ဓာတ်ပုံပြခန်း ရော ၊
၂ ။ ရွှေတိဂုံဘုရား က ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ် ပြခန်း ရော ၊
၃ ။ ရွှေတိဂုံဘုရား ရာဟုဒေါင့်နားက အောင်မြေမှာ ပရိုဂျက်တာကြီးထိုးပြီး ၊
ဗုဒ္ဓဂယာခရီးစဉ်အကြောင်းကို မိုက်နဲ့ ရှင်းပြနေတာ ရော ၊
အဲဒါ အားလုံးကို ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်နေတာ တစ်ယောက်ထဲပါ ။ ဦးသန်းဇော် တဲ့ ။
ကျနော် နှင့် ဝိတိုရိယ / နတ်မ တောင်မှာ ဘုန်းကြီး အတူတူ ဝတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ ။
ကိုဖောနဲ့သိတယ်ဆိုတော့ သူ့လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးထောက်ခံသူတွေ ရှိနေကြောင်းးးး ကြုံရင် သတင်းစကားပါးပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ် ဆာယေးဆရာမကကော ကိုယ်ထင်မပြတော့ဘူးလား။
ရိုးတံကျဲကျဲတို့ မြူကျနေပုံတို့.. ခြေရာ အရွက်ခြောက်လေး
ရိုက်တာက ဆိုက်ကိုဗေဒအရ စိတ်ထဲမှာ ကျိတ်ပြီး လွမ်းမော အထီးကျန်နေတဲ့ပုံရိပ်မို့
ရဲဇားနဲ့ကွဲနေသူဒို့၊ အပိုရီးတွေ အများဆုံးရိုက်တတ်တဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတော့
ပိုပိုသာသာလေးတွေပြီး ဆာယေးဆရာမက သူချစ် ၅ယောက်ကို ထားခဲ့တဲ့ အပိုရီးများလားလို့ဗျာ။
ဒီဆာယေးဆရာမက တစ်ရွာလုံးလည်း မသိတဲ့သူ မရှိသလောက် ကျော်ကြားးးး အဲ- ကိုယ်ထင်ပြထားပါတယ်လို့။
ဂွဇက်ထဲမှာ ဓာတ်သေမရိုက်တတ်တာဆိုလို့ ကျောက်စ် ပဲ ရှိမယ်ထင်ရဲ့…
ရွှေတိဂုံတော့ မင်္ဂလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့ကမှ ရောက်တယ်…
ဘာလို့မှန်းမသိ… ဘိုခင်ညွန့်တို့ ထီးတင်ကတည်းက မသွားချင်တော့ဘူး…
ဟီ ဟိ အပေါ်က mgpoe zar ကလည်း အကြောင်းသိချင်း ဗေဒင်ဟောနေပြီ…
ဓာတ်သေပုံတွေပြောရင် မင်ဂါဆောင်ခါနီး စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဖုံးပြောနေတဲ့ပုံကို တော်တော်သဘောကျတယ်။ :p
နောင်တစ်ချိန် အသုံးဝင်မလားလို့ သတင်းပေးထားတာ။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မယ်ဆိုပီး ချာကနဲမျက်နှာလွှဲသွားတာ ခုထိ
ဖိုတိုရှော့လုပ်ပြီး မျက်စိနေရာမှာ အသဲပုံလေး ကပ်ပေးလိုက်ရင် ပိုပီပြင်သွားမယ်။
နွေမရောက်ခင် လေးရက်လောက်ကတည်းက အဲ့သီချင်းကို ညည်းနေတာ
အောက်ဆုံးပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ဘာပြောရမယ် မသိ
မြေပြင်နဲ့လမ်းမ နီးနေပါလျှက်နဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေက မြေပြင်မှာချည်းပဲ ရှိနေလို့ အနုပညာသမားပီပီ (အင်တာနေရှင်နယ် အပျီအပျီဆိုင်ရာဆာယေးစယာအကျော်အမော် ဘပုနဲ့ တဆိုဒ်ထဲတူတူရေးနေတာဆိုတော့) တမျိုးခံစားရလို့ ရိုက်ထားလိုက်တာ။
အဆင်ပြေတဲ့နေရာထည့်သုံးမလို့ ၀ှက်ဖဲထားတာ အမှတ်တမဲ့နဲ့ ပိုစ့်ထဲပါသွားတာ။
မှီဘူးလားဆိုတာလေးလည်း သိဘာရစေခည …
ခါတော်မီ ရင် ၂၀၀ နော် .. ငိငိငိ
ကဗျာ နဲ့ စပြီး
ကဗျာ နဲ့ ဆုံး ထားတာပဲ…
ရုပ်ရှင်တွေမှာ ကားကူး/ကားဆက်တာကို အတုခိုးပြီး……
ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စတွေကို တွဲမိအောင် ကူးပြောင်းပေးထားတာ ဦးပါရေ။
တွဲမရတဲ့ နောက်ဆုံးပုံက ကန့်လန့်ပါသွားတာ။
ပုံတွေအားလုံးလှပါတယ်..ဒါပေမဲ့“ရိုးတံကျဲကျဲ …. ပင်အိုတို့ အလှချင်းလည်းပြိုင်…” ပုံလေးအကြိုက်ဆုံးပဲ
အရင်ကတည်းက ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို ၀ါသနာပါတယ်။
ဒီရွာရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ သွားလေရာတိုင်းလိုလို ကင်မရာ သယ်ဖြစ်သွားတယ်။
ကင်မရာမပါလည်း ဖုန်းကင်မရာနဲ့ တွေ့လေရာ ရိုက်ဖြစ်တော့တာပဲ။
ဒါ့အပြင် ကြုံသမျှ ရွာထဲမှာ ပြန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကလည်း ပေါ်သေးးးး
မမက ကိုရင်စည်သူပြောတဲ့အတိုင်း တကယ့်ကိုပဲ သူချစ်ငါးယောက်ကိုထားခဲ့တာပေါ့လေ
မောင်ပိုးဇာက ကိုရင်စည်သူဆိုတာ ခရစ်လေး ပြောမှပဲ သိတော့တယ်။
ကရင်စည်ကို ဒါရိုက်တာလုပ်မှပဲ မင်းသမီးလုပ်ပြီး သူချစ်ငါးယောက်ကို ထားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းရိုက်ရမယ်။
ဒါပေမယ့် ကရင်စည်က ခရစ်ကို မင်းသမီးတင်ပြီး ကိုယ်တိုင်မင်းသားလုပ်ချင်နေတာလား မသိ…
ငင်… ၀ုတ်ဖူးလား.. သများစိတ်ထင် ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်တွေဟောတတ်ပြောတတ်တာ ကိုရင်စည်တစ်ယောက်တည်းမို့လို့ သူထင်ပြီး ရမ်းတုတ်လိုက်တာ.. :)) မဟုတ်ရင်တော့ဆောတီး….
ခွစ်လေး မှန်ပါဒယ်ကွယ်..။ အဲဒီ ငပိုး ခုတော့ တဂိုးပီးဒဂိုး သွင်းနေလေရဲ့.. ဘောလုံးကန်ဒါဂိုပြောထှာစ်… ခွစ်လေး တမျိုး အထဲနဲ့… ကွိကွိ
ခါတော်မီ ဆိုပေမဲ့လည်း အကြောင်းအရာအစုံကို ဖတ်ရလို့ ကျေးကျေးပါ အန်တီမမရေ
Touch Screen ဖုံး / ဖုံး=phone ကို ဖုန်းလို့ရေးရပါကြောင်း
ကမ်းကြီးပြောခိုင်းလို့ ခိ ခိ
ကမ်းကြီးရွာထဲမ၀င်တာကြာလို့ သတ်ပုံစစ်မယ့်သူမရှိဘူးဆိုပြီး ရေးလိုက်တာ… လို့ မထင်ပါနဲ့။ :p
ကရဲစည်ရေ- ကမ်းကြီးကို သတ်ပုံပြင်စေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြောပါလို့ ပြောလိုက်ပါ။
နီးလျက်နဲ့ ဝေးဆိုတဲ့ ပုံရိပ်လေးမှာ ကျနော် အကြာကြီး ပိတ်မိသွားတယ်
အဟမ်း အဟမ်း မစ်စတာ အလင်းဆက်…. ဟတ်ထိသွားတယ် ထင်ပါ့။
နှင်းမှုန်မှုန်ကြားက ဘယ်နားလေးပါလိမ့်၊မာမားကို မနက် လမ်းထလျှောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နှင်းတွေဟာ ကျောက်စ်ရဲ့ နှင်းလိုပဲ အင်အားတော်တော်ကြီး ပါပေတယ်။
ဘုရားရောင်ခြည်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ ကံထူးရှင်ပဲ၊မုန့်ကျွေးပါ(ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်)
သတ်ပုံမမ ပို့စ်မှာ သတ်ပုံ ပြင်ပါမည်။
Night mode လို့ဖြစ်ရမည် ထင်ပါဂျောင်း။
(ကွဲစည်တို့ မမကမ်းတို့နဲ့ မတူသော အတွေးနဲ့ မန့်ရရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို Phone ကို အသံလှယ်တာဖြစ်လို့ ဖုံး/ဖုန်း ဘာဖြစ်ဖြစ်သုံးချင်ပါဂျောင်း၊ကန့်လန့်တိုက်ကြည့်တာ)
အဲဒီ ဘုရားပုံလေး သဘောကျပါဂျောင်း၊တခါလောက်တော့ စမ်းကြည့်ရန် ကြံပါဂျောင်း။
ကရင်စည်ကို အကြာကြီး ပျောက်နေမှု၊ပုံမှားရိုက်မှု၊ မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့ ဒဏ်ချချင်ပါဂျောင်း။
မတ်လရောက်မှ မနက်ပိုင်းနှင်းတွေကျနေလို့ ရွှေတိဂုံဘုရားက ငါးကန်နားမှာ သွားလျှောက်တာ။
အိမ်က လူတွေက လမ်းလျှောက်တာလား ဓာတ်ပုံရိုက်တာလားတဲ့။
စုံထောက်ကြီးဦးရှံစားလို မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့…
ကြုံတုန်း မှားတတ်တာလေး ပြောချင်ပါတယ်။
မီ ဆိုတာ အချိန်မီတာ၊ နောက်မကျတာကို ရေးချင်ရင်သုံးပြီး
မှီဆိုတာကတော့ မှီငြမ်းတာ၊ (နံရံကို) မှီတာ နေရာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
အချိန်မီ မှီငြမ်းပြုချင်ရင်တော့ သတ်ပုံကျမ်းကို http://myanmarwords.pikay.org/ လှန်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
အမ်တီမမ အဲလို ပုံတွေထက် ကန်ဒေါ်ဂျီးဇောင်းသွားပီး စုံတွဲဓာတ်ပုံ ချောင်းရိုက်တာ လူကြိုက်ပိုများမြည်..။ စေတနှာဖြင့် ပြောဂျင်းဖြစ်အိ..
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြန်းဂေဇက်ရွာသတင်းထောက်ပီပီ …………….
ထိုင်ရာမှမထပဲ ကမ္ဘာတလွှားမှ ပုံများ ရနိုင်ပါသောကြောင့်………….
ကိုယ့်ဘေးကိုယ်သိပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင်အမောင်ကြောင်သည်လည်း ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်ပါစေသတည်းးးးးး
မမ လဲ မ ရိုက် ဘူး မရိုက်ဘူး နဲ့ ပုံ ကောင်း တွေ ထွက် လာ သား ဘဲ
ခုလို အမှန်အတိုင်းပြောတာကိုတော့ သဘောကျတယ်။